ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစေးကပ်ဆုံးအသီးများဖြစ်သော Durian ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့အနံ့ရှိတာလဲ | ခရီးသွားသတင်း
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | | gastronomy, အာရှခရီးသွားခြင်း
အသီးသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအားလုံး၏အာဟာရကိုမရရှိနိုင်သောအစားအစာဖြစ်သည်။ သစ်သီးများအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်သောအာဟာရများနှင့်ဗီတာမင်များရှိသည်။ သဘာဝသည်ပညာရှိပြီး၎င်းအပြင်ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအရသာဖြင့်စားသည်။ .. အားလုံး၎င်း၏အာဟာရကနေအကျိုးခံစားရန်အလို့ငှာ။ သို့သော်သဘာဝသည်၎င်း၏အသီးအပွင့်အားလုံးကိုဆွဲဆောင်ရန်မေ့သွားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစေးကပ်ဆုံးအသီးဖြစ်သော Durian ကိုဆိုလိုသည်။
သစ်သီးတစ်မျိုးကအနံ့ဆိုးနေရင်လူတွေလိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအရာကတော့ငါတို့အနားမှာတောင်ရှိနေချင်မှာမဟုတ်ဘူး။! တစ် ဦး ကအနံ့သို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့ - ရှာဖွေနေအစားအစာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ဗီဇကငါတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအသိစိတ်ကပြောလိမ့်မယ်။ ဒါကိုငါတို့မစားနိုင်ဘူး။
1 ဘန်ကောက်၏စျေးကွက်များတွင် Durian
3 durian နှင့်အတူအတွေ့အကြုံ
7.2 ချစ်သောသူမိန်းကလေးတစ် ဦး ရန်
သငျသညျမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါ ဘန်ကောက်၊ ကွာလာလမ်ပူသို့မဟုတ်စင်္ကာပူတို့တွင်စျေးကွက်အချို့ရှိသည် (အချို့သောမြို့များအကြား) သင်သည်သေကောင်၏ပြင်းထန်သောအနံ့ကိုသတိပြုမိသည် (အချို့ကပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရသော်လည်းအချို့သောအနံ့များကအနံ့အရသာရှိသည်ဟုထင်မှတ်သော်လည်း) သင်သည်အရောင်အသွေးစုံလင်သည့်ဒူရီယန်ကိုရောင်းချသည့်သစ်သီးရပ်ကွက်အနီးတွင်ရှိသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့်အရှေ့တောင်အာရှတစ်လျှောက်သစ်သီးဝလံဘုရင်အဖြစ်လူသိများသောကြောင့်ယင်းကိုကြိုးစား ၀ ိုင်းဝန်းရဲသောမမျှော်လင့်သောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်အမှန်တကယ်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသည်။
အချို့က၎င်းကို '' အိမ်သာထဲမှာ vanilla cream စားတာနဲ့တူတယ်၊ ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနံ့ကိုဝက်မစင်၊ အရောင်တင်ဆီနဲ့ကြက်သွန်နီလို့ခေါ်နိုင်တယ်။
Durium သည် Durium ဟုခေါ်သောသစ်ပင်များပေါ်တွင်ကြီးထွားလာပြီးအရှေ့တောင်အာရှတစ်လျှောက်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားနှင့်ဘရူနိုင်းတို့၏ဇာတိအသီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအနံ့ရှိသောကြောင့်သာမကအသွင်အပြင်ကြောင့်လည်းအသိအမှတ်ပြုရန်လွယ်ကူသောအသီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအရွယ်အစား (အရှည် ၃၀ စင်တီမီတာအထိ) သည်၎င်းသည်တာရှည်ခံသို့မဟုတ်အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးဆူးများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ တကယ်တော့၎င်း၏အမည်ကိုဆူးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောမလေး "duri" မှဆင်းသက်လာသည်။ ဒရီယန်၏ပျော့ဖတ်သည်အရသာရှိပြီးအရသာရှိပြီးအရသာမှာလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပြီးချိုမြိန်သောအရသာရှိသည်။
ဒီအရေးအသား၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ရှိခဲ့ပါတယ် ဒီပိုင်ထိုက်သောအသီးနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ နှင့်ဤနည်းကိုဖော်ပြသည်:
“ ဒူရီယန်နဲ့ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကစင်္ကာပူဟိန္ဒူရပ်ကွက်ကစျေးကွက်တစ်ခုမှာပါ။ ငါကရောင်းသောတင်းကုပ်ထံသို့ချဉ်းကပ်။ , ချက်ချင်းစျေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ငါ့ကိုကြိုးစားရန်အပိုင်းအစကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ရယ်စရာကောင်းတာကဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူကကျွန်တော့်အသီးကိုကမ်းပေးရင်းလှည့်စားပြုံးပြသည်။ ငါပြောရရင်မင်းက durian အနံ့ကိုခံနိုင်ရင်အရသာကအရမ်းချိုတယ်။ "
ယင်း၏အနံ့သည်အလွန်ပြင်းထန်သည် လေဆိပ်အများအပြား၊ ဟိုတယ်များနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများတွင်တားမြစ်ထားသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတစ်လျှောက်လုံး။ ဒူရီယန်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အနံ့ခံလိုက်တာနဲ့အမြဲတမ်းသတိရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤအသီးသည်၎င်း၏အခွံသည်နဂိုအတိုင်းမပွင့်သေးလျှင်ပင်လူအများမခံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောပုပ်စပ်သောအနံ့ရှိသည်။ သင်ကအကွာအဝေးကနေအနံ့နိုင်ပါတယ်။ အစားအသီး၏အရသာနှင့်အရသာကိုနှစ်သက်သောလူနည်းစုသာရှိသည်။ ထိုအသီးသည်လူအချို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်းအခြားသူများကိုလွန်စွာမုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်
သစ်သီးဝလံတွေထဲမှာအတွင်းပိုင်းကိုစားတဲ့လူတွေရှိတယ်, ဒါပေမယ့်ချက်ပြုတ်စားရန်ကြိုက်တတ်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်။ ဒူရီယန်၏အတွင်းပိုင်းကိုအရှေ့တောင်အာရှဟင်းလျာများအရသာအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပြီးရိုးရာသကြားလုံးများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။
ဤအသီးကိုသီးခြင်းအားဖြင့်အလွန်ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သူများလည်းရှိသည် ၎င်းကိုရိုးရာအာရှဆေးပညာအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အဖျားကျစေခြင်းနှင့်ခွန်အားကြီးသော aphrodisiac ကဲ့သို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအသီးသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အနံ့ရှိသောကြောင့်အနံ့ဆိုးထွက်စေသည့်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒြပ်ပေါင်းများကိုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖော်မြူလာများဖြင့်ဖော်ထုတ်ကြသည် တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား (စုစုပေါင်းဓာတုဒြပ်ပေါင်း ၅၀ ခန့်ရှိသည်) ။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးချင်းစီသည်ဤအသီးနှင့်ဆက်နွှယ်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးအကြားကွဲပြားခြားနားသောအနံ့များကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ပါစေ။ ကြက်သွန်နီ၊ ဒိန်ခဲအပြာရောင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပျားရည်တို့အကြားအနံ့ရှိပြီးအနံ့အရသာရှိသောလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အမြင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုထပ်ထည့်သည်။
REACT YouTube channel မှသင့်အားတင်ပြခဲ့သောဤပထမဗီဒီယိုတွင်၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့၏ဘာသာစကားနှင့်အပြုအမူများကပြောသောကြောင့်ဤအသီးကိုသူတို့မည်သို့တုံ့ပြန်ပုံကိုသိရန်ဤဘာသာစကားကိုသိရန်မလိုအပ်ပါ။ အားလုံး။ ငါကဒီဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးထားလိုက်တာကကလေးတွေဟာစိတ်ရင်းမှန်နဲ့၊ သငျသညျထိုသူတို့အ၌ဤထူးခြားသောအသီး၏အဖြစ်မှန်တွေ့နိုင်ပါသည်။
ချစ်သောသူမိန်းကလေးတစ် ဦး ရန်
ဒီဒုတိယဗီဒီယိုမှာ durian ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူရဲ့ပုံသဏ္,ာန်၊ အနံ့နဲ့အရသာနှစ်မျိုးစလုံးကိုနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုပြချင်ပါတယ်။ ဒါကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့အသီးလို့ထင်ရပါတယ်သူနဲ့တူချင်တာဘယ်လောက်လိုချင်လဲ ငါ AnaVegana ယူကျု့ချန်နယ်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်ဤအသီးကိုအလွန်ကြိုက်သည်ဟုထင်ပါသလားသို့မဟုတ်ယင်းကိုသင်မုန်းတီးသည်ဟုခံစားရပါသလော။ မင်းစမ်းကြည့်ဖူးလား။ သင်၏အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » gastronomy » ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစေးကပ်ဆုံးအသီးများဖြစ်သော Durian
လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုငါနားမလည်ဘူး၊ အစကတည်းကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့ရှိပေမယ့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အရသာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလတ်ဆတ်သောအစာကိုစားသောအခါ "တုံ့ပြန်မှု" ဖြစ်ပေါ်သလဲ?
အဆိုပါ manga ကိုမှတ်တမ်းတင် ဟုသူကပြောသည်
The Manga Chronicler အားပြန်ပြောပါ
ငါလည်းအတူတူပဲ။ အသီးကိုကိုက်တဲ့အခါအနံ့ကထွက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။
ငါအရှေ့တိုင်းစားနပ်ရိက္ခာစတိုးဆိုင်များ၊ ဒီအသီးနှင့်လုပ်ထားတဲ့သကြားလုံးများ ၀ ယ်လိုက်ပြီ။ သူတို့ဟာတကယ်ကိုထူးကဲသည်။ ငါဟားဟားဟားဟားမတိုင်မီစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီဆေးလုံးကိုငါစားလိုက်ရင်ကျွန်မယောက်ျားကငါ့ကိုနမ်းဖို့ငြင်းဆန်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမယ်။ အရသာ။
Jolin ကျွန်ုပ်သည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တစ်လခန့်ရှိခဲ့ဖူးသောအရာများကိုနားမလည်ပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းသည်အသီးကိုနေ့တိုင်းနီးပါးစားသည်။ ၎င်းသည်အရသာသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအနံ့ပြင်းသော်လည်းအနံ့အရသာနှင့်တူသည်သို့မဟုတ်သင်ပြောသည့်အရာကဲ့သို့အနံ့မရှိပါ။ .. ငါဘာမှနားမလည်ဘူး .... အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ယခုနှစ်ဒီအချိန်မှာ, durian ကအနံ့, အသီးနှင့်တူသောအနံ့နှင့်အနံ့နှင့်ငါအလွန်ကံကောင်းခဲ့ကြ ... အနံ့
ပျော်စရာ !! ငါအရှေ့တောင်အာရှကိုသွားတိုင်းပျော်ရွှင်မှုများစွာနဲ့မြည်းစမ်းသည် (vlr) ။ အဆင်မပြေတာကသိသာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာသာအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ငါမလေးရှားမှာပထမဆုံးအကြိမ် ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ဟိုတယ်မှာထည့်ပြီးငါတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာအနံ့မပျောက်ခဲ့ဘူး။ သူ့ကိုဟိုတယ်တွေဆီခေါ်ဆောင်တာကိုတားမြစ်ထားတယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာငါတို့သိသွားတယ်။
ငါနှစ်သက်တဲ့သူကိုအရမ်းလေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတဲ့အခါငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးကိုက်တာကငါ့ကိုငါအော့အန်လုနီးပါးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။ ၎င်းတွင်အလွန်ထူးခြားသောအရသာရှိပြီး tour ည့်သည်များအနေဖြင့်၎င်းကိုအရသာရှိသောအရသာများရှိသော်လည်းအရသာရှိပြီးအရသာရှိပြီးအရသာရှိပါသည်။ !
Francisco က Mendez ဟုသူကပြောသည်
သူတို့တူပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း Nayarit မှဤသစ်သီးရည်သည်အလွန်အရသာရှိသော်လည်း၎င်းသည်မွှေးကြိုင်။ မက္ကဆီကို၊ Monterrey တွင်စားသည်။
Diogenes ။ ဟုသူကပြောသည်
တကယ်တော့ငါဟာအာရှသားမဟုတ်သလိုအာရှကိုမသွားပါဘူး။ ငယ်ငယ်တုန်းကအဘွားကကျွန်မအတွက်တိုင်းပြည်မှာခေါင်းလျှော်ရည်ဟုခေါ်သည့်အရာကဒီအသီးကိုသီးခဲ့တယ်။ ဒီအသီးကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ဘုံသို့မဟုတ်ဤအသီးကိုငါ့တိုင်းပြည်တွင်လူသိများသည်။ ငါတို့ကခေါ်သည်။ Jaca: ငါကိုယ်တိုင်နှင့်အထူးသဖြင့်အသီးကောင်းလျှင်အမွှေးရနံ့နှင့်ကြက်သွန်နီသို့မဟုတ်မစင်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အားလေးစားသည်။ ထင်မြင်ချက်တွေရှိပေမယ့်ထင်မြင်ချက်တွေကိုဘယ်သူ့ကိုတင်ပြတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ငါကအနံ့ကိုနှစ်သက်တယ်။ အရသာကတော့များသောအားဖြင့်စတော်ဘယ်ရီ chiclet ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ငှက်ပျောသီးကဲ့သို့အရသာရှိသည်။ အနံ့၊ အရွယ်အစားနှင့်အရသာတို့ကြောင့်အသီးသည်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်ငါသဘောတူသောတစ်ခုတည်းသောအမှန်တရားဖြစ်သည်။
ငါဒီအသီးကိုနှစ်သက်တယ်။ သူတို့ကိုငါစားရတာ ၀ မ်းမြောက်မိပါတယ်။ အိမ်အပြင်ဘက်မှာမိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားရင်းဒီအသီးကိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးလာတဲ့အတွက်ငါဘုရားသခင်ကို ၀ မ်းမြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါများစွာသော beces တွေဖြစ်တဲ့အစာကိုစားတဲ့အခါ beces အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာ ငါ့ကိုအရမ်းရယ်ရတယ်။
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ Jaca ဟာDuriánနဲ့မတူဘူး။ သူတို့ကအတန်းတစ်ခုတည်းကလာကြတယ်။ Jaca ဟာချိုမြိန်တယ်။ လူများစွာကဒီအသီးနှစ်မျိုးကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်သူတို့အမှန်တကယ်မြည်းကြည့်ခဲ့တာကတော့ဒူရီယန်မဟုတ်ဘဲအခြားမျိုးစိတ်တစ်ခုလို့ပြောရင်သူတို့ကအရသာရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။